Fa maninona no sarotra ny mamerina ny fonosana kosmetika?
Amin'izao fotoana izao, ny 14% ny fonosana plastika manerantany ihany no voaverina - 5% fotsiny amin'ireo fitaovana no ampiasaina indray noho ny fako ateraky ny fizarana sy ny fanodinana. Ny famerenana indray ny fonosana hatsaran-tarehy dia matetika no sarotra kokoa. Manazava i Wingstrand: "fonosana maro no vita amin'ny akora mifangaro, ka ...
Ny ankamaroan'ny fonosana dia vita amin'ny vera na acrylic？
Ny ankamaroan'ny fonosana dia vita amin'ny vera na acrylic. Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahita marika kosmetika maro dia maro isika teny an-tsena tamin'ny fampiasana tavoahangy fanosotra ho an'ny biby. Ka maninona no malaza be ny fonosana lotion biby? Voalohany indrindra, mavesatra loatra ny tavoahangy vera na akrilika, ary tsy conduci ny lanja ...
Fanadihadiana momba ny tombony sy fatiantoka amin'ny tavoahangy plastika
Ny tsenan'ny tavoahangy plastika eran-tany dia antenaina hitombo be mandritra ny vanim-potoana mialoha. Ny fitomboan'ny rindranasa ao amin'ny indostrian'ny pharmaceutika sy cosmetic dia mitarika ny fangatahana tavoahangy plastika. Raha ampitahaina amin'ny fitaovana hafa tsy miovaova, lafo, marefo ary mavesatra (toy ny vera sy m ...
Tavoahangy tsy misy rivotra vaovao Arrival – Fa maninona no mandeha tsy mandeha amin'ny fonosanao kosmetika?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-09-11
Ny tavoahangy paompy tsy misy hatsiaka dia miaro ny vokatra mora tohina toy ny menaka fikarakarana hoditra voajanahary, serum, fototra, ary menaka fanodinam-bidy tsy misy preservative hafa amin'ny alàlan'ny fisorohana azy ireo amin'ny fitrandrahana tafahoatra amin'ny rivotra, ka hampiakatra ny fiainana talantalana hatramin'ny 15% kokoa. Izany dia mahatonga ny teknolojia tsy misy rivotra ho lasa ho avy vaovao ...
Polonina tavoahangy mainty, Kaontenera vovoka kosmetika miaraka amin'ny sivana, Fonosana kosmetika vita amin'ny tavoahangy, Kaontenera fanosotra kosmetika, Tavoahangy fanosotra kosmetika, Tavoahangy fanosotra amin'ny maso,